Fofifa: ahazoana 7-8 t/ha ny masomboly X 265 | NewsMada
Fofifa: ahazoana 7-8 t/ha ny masomboly X 265
Anisan’ny masomboly vary sahaza ny eto Madagasikara hitan’ny Foibe fikarohana mikasika ny fambolena (Fofifa) ny X 265, efa be mpampiasa tokoa, ankehitriny. Notsipihin’ny tale jeneraly, ny Pr. Razafinjara Lala, fa efa ela ny namoronana azy ity fa mbola nasiana fanatsarana ara-teknika, hahazaka ny toe-tany sy ny toetr’andro amin’izao fiovan’ny toetr’andro izao eto Madagasikara. Ahazoana voka-bary 7 hatramin’ny 8 taonina isaky ny hekitara ny X 265, raha 5 hatramin’ny 6 t/ha tany aloha.
Anisan’ny endriky ny fiantraikan’ny fiovan’ny toetr’andro ny fahataran’ny fiavian’ny orana sady tsy ampy, kely ny rotsak’orana. Nambaran’ny tale jeneralin’ny Foibe Fikarohana momba ny Fambolena (Fofifa), ny Pr. Razafinjara Lala, fa miakatra koa ny maripana, manodidina ny 1 hatramin’ny 2°C, raha oharina amin’ny mahazatra ny hiainana amin’izao fotoana izao.
Raha raisina ny mikasika ny vary, notsoriny fa tsy mety loatra intsony ny fampiasana ny masomboly mahazatra, raha izao vanim-potoana sy ny toetr’andro izao no jerena, toy ny vary gasy sy ny makalioka, ohatra. Antony, ela kokoa ny fotoana fanirin’izy ireny mandritra ny ketsa (roa na telo volana), sy indrindra rehefa afindra an-tanimbary (telo na efa-bolana).
Vahaolana, noho izany, ny fampiasana karazam-bary haingam-pitombo sady mahazaka ny hafanana, toy ny X 265.